कन्टेनरमा ल्याइएका ५० जना भारतीयलाई धुलिखेल जङ्गलमा झारेको भिडियो फेला !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/कन्टेनरमा ल्याइएका ५० जना भारतीयलाई धुलिखेल जङ्गलमा झारेको भिडियो फेला !!!
काठमाडौँ । कोरोना म`हामा`रीका बेला भएको कडा लकडाउनका बीच भारतबाट लुकेर कन्टेनरमा नेपाल छिरेका ५० भारतीय जङ्गलमा झर्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फेला परेको छ ।
धुलिखेलकी एक स्थानीय युवती ज्योत`सना सैँ`जुले भारतबाट लुकेर आएका एक `ट्या`ङ्कर मानिस जंगल`मा झा`र्दै गरेको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेकी हुन् । सा`माजिक स`ञ्जालमा अहिले उनले खिचेको भिडियो भाइरल भएको छ। भारतबाट आएक ति ५० जना भारतीय नागरिक अहिले पक्राउ परिसकेका छन् ।
उनका अनुसार ती भारतीय नागरिक जल्केनीमा विद्युत् प्रसारण लाइनमा काम गर्ने मजदुर हुन् । आज बिहान करिब ८ बजे जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेल स्थित बस बिसौनी भन्दा केही तल अरनिको राजमार्ग स्थित ज`ङ्गल `क्षेत्रमा कन्टेनर भ्यानले ती नागरिकलाई ओरालेको थियो। ती नागरिकलाई जहाँबाट आएको त्यही फर्काउने वा अन्य कुनै सावधानी अपनाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्र`जि`अ तिमल्सिनाले बताए।
“नियन्त्रित भारतीय नागरिकलाई जहाँबाट आएको उतै फर्काउने वा अन्य कुनै प्रक्रियमा जाने भन्नेबारे सम्बन्धित निकायसँग थप छलफल हुँदैछ, बिनासूचना यसरी मानिस ल्याएर छाड्न पाइँदैन”, तिम`ल्सिनाले भने। उनले ती नागरिकका बारेमा सिन्धु`पाल्चोक जि`ल्ला प्रशासन कार्यालय सँग समन्वय भइरहेको बताए ।